के हो नागरिक एप ? के के सुबिधा लिन सकिन्छ ? - Netizen Nepal
के हो नागरिक एप ? के के सुबिधा लिन सकिन्छ ?
in नेटिजन मंच, बजार, विज्ञान / प्रविधि, हाम्रो नेपाल
काठमाडौं,२१ बैशाख । सबै सरकारी सेवा एउटै एपबाट दिने गरी तयार पारिएको नागरिक एप सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आइतबार सुरुवात गरिएको छ। गत माघ २ गते नागरिक एपको बेटा संस्करण सार्वजनिक भएकोमा बेटा भर्सनकै क्रममा यो एप सवा पाँच लाखभन्दा बढीले डाउनलोड गरेको र १ लाख ९१ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले आफूलाई दर्ता गराइसकेको बताएको छ । सरकारले सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानकै पाटोको रुपमा यो एपलाई प्रयोगमा ल्याएको बताएको छ।
सार्बजनिक सेवालाई प्रभावकारी, सहज र सरल बनाउने उदेश्येले ल्याइएको यो एपमा के कस्ता सुबिधा छन् ? यो बारेमा यहाँ मुख्य जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ।
के के छन् त सुबिधा ?
सरकारले एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नागरिक एप ल्याएको हो । यसमा नागरिकता, राहदानी र मतदाता परिचयपत्र जस्ता नागरिकका प्रमाणीत विवरण छन् । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको आफ्नो विवरण हेर्न सकिने सुविधा पनि नागरिक एपमा उपलब्ध छ । सरकारले जनताका गुनासा सुन्न सञ्चालन गरेको हेलो सरकारको सुविधा पनि यसमा जोडिएको छ ।
एसएलसी र प्लसटु तहका शैक्षिक विवरणसमेत एपमा राखिएका छन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाको जानकारी हेर्न सकिने सुविधा पनि यसमा थपिएको छ ।
स्थायी लेखा नम्बर र पुलिस रिपोर्ट समेत यसैबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
प्रयोगकर्ताले ईमेल भेरिफाई गरेर आफ्नो नागरिक एपमा लिङ्क गराउन सक्छन् । यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलका नम्बरबाट मात्र नागरिक एपको खाता खोल्न सकिने अवस्था रहेकोमा पछिल्लो समय स्मार्ट टेलिकम समेत एपमा जोडिएको छ ।
यससँगै अब नेपालका जुनसुकै मोबाइल नम्बरबाट नागरिक एपको खाता खोल्न सकिने भएको छ । तर, मोबाइल नम्बर भने अनिवार्य रुपमा आफ्नै नामको हुनुपर्ने बनाइएको छ ।
खाता खोल्ने क्रममा नागरिकता फेला नपरेको वा त्रुटी देखिएको अवस्थामा एपबाटै त्यसको समाधानका लागि अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अब मतदाता परिचयपत्र, राहदानी, प्यान, शैक्षिक विवरणमा कुनै त्रुटी देखिएमा सच्याउन सकिने सुविधा समेत थप हुने सरकारले जनाएको छ ।
सवारीसाधनको राजस्व तथा नवीकरण शुल्क पनि अब नागरिक एपबाटै तिर्न सकिनेछ ।
एपबाट आफ्नो लालपूर्जा तथा जग्गाको कित्ता अनलाइनमा हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजश्व तिर्न सकिनेछ ।
भूमिसुधारमा रहेको आफ्नो जग्गाको स्थिति थाहा पाउन सकिनेछ, स्थानीय तहबाट सिफारिस लिने तथा कर तिर्ने लगायतका सेवा पनि एपले नै दिनेछ । एपबाट नागरिक पहिचान प्रमाणीकरण गर्न सकिने क्यूआर कोड राखिएको छ । यसको सहयोगमा हाल एपबाटै बैंक खाता खोल्न सकिने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
अब यसलाई क्रमशः लोकसेवाको फारम भर्ने, सिम कार्ड खरिद गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा लिने लगायतका काममा समेत प्रयोगमा ल्याइने सरकारी घोषणा छ । यसका साथै मोबाइलमा मात्र उपलब्ध नागरिक एपका सेवा तथा सुविधा अबका दिनमा वेबसाइटबाट समेत लिन सकिने उल्लेख छ ।
सरकारले दिगितल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइसकेको सन्दर्भमा सार्बजनिक सेवालाई स्मार्ट सेवामा उपलब्ध गराउने प्रयास अन्तर्गत यो एप लाइ प्रयोगमा ल्याइएको छ।
थप जानकारीको लागि यो भिडियो हेर्नुहोस्